UEFA Oo Isku Dayaysa Inay Manchester City Ka Mamnuucdo Tartanka Champions League Maalin Ka Dib Markii Ay Hanteen Premier League - Gool24.Net
UEFA Oo Isku Dayaysa Inay Manchester City Ka Mamnuucdo Tartanka Champions League Maalin Ka Dib Markii Ay Hanteen Premier League
May 13, 2019 Saed Balaleti
Tababare Pep Guardiola ayaa bartilmaameedsanaya xilli ciyaareedka soo socda koobka Champions League ka dib markii kooxdiisa bishii hore lagu reebay wareega sideed dhamaadka.
Si la mid ah PSG, kooxaha taajiriinta ayaa laga filanayaa inay ka tartamaan Yurub, laakiin taajirnimadooda ayaa iyadana dhibaato u abuureysa.
Wargeyska Mareykanka ee New York Times ayaa sheegtay in UEFA ay raadineyso wado ay Manchester City kaga mamnuucdo Champions League ka dib baaritaan ay sameysay.
Waxaa lagu eedeynayaa kooxda inay warbixin been ah u gudbisay UEFA oo ku aadan sida ay u qarashgareyso lacageeda.
Xubno ka tirsan gudiga koontaroola dhaqaalaha ee UFA ayaa kulmay si ay uga arinsadaan sida ay u ciqaabi lahaayeen Manchester City haddii danbi lagu helo, waxaana haatan ay si dhab ah uga hadlayaan in laga mamnuuco tartanka Champions League.
Xayiraada laga saaraya tartanka Champions League waxa ay socon doontaa ugu yaraan hal xilli ciyaareed. Ilaa iyo haatan ma cada haddii ganaaxa laga saaraya Champions League uu ka bilaabanayo xilli ciyaareedka soo socda ee 2019/20 ama xilli ciyaareedka ku xiga.
Ganaaxa kasta oo lagu soo rogayo Man City waa in lagu dhawaaqaa bisha Juun markaasoo uu bilaabanayo isreebreebka Champions League si ay City awood ugu yeelato inay racfaan ka qaadato. Manchester City ayaa beenisay inay wax qalad ah sameysay.
Wargeyska New York Times ayaa sheegtay in dukumiintiyada laga hayo City ay ku jiraan iimeylo iyo dukumiintiyo kale oo cadeynaya in kooxda ay isku dayday inay qiyaanto sharciga dhaqaale wanaaga Yurub.